Vanonetseka neChirwere cheShuga Votambira neMufaro App ye D-Nurse
Mumwe murwere ane chirwere cheshuga achizvitarisa shuga iri mumuviri make.
Vamwe vanhu vanorwara nechirwere cheshuga kana kuti diabetes vanoti vari kufara zvikuru nekushandisa kwavari kuita nharembozha dzavo kana kuti app inonzi D-nurse manage mukuzvivheneka kuti shuga inenge yakamira sei mumuviri mavo.
Gurukota rinoona nezvehutano Dr. David Parirenyatwa vanoti vanhu vanodarika miriyoni inwe chete nezviuru mazana mashanu munyika vane chirwere cheshuga uye vamwe vacho havatozive kuti vanascho nenyaya yekusaenda kunovhenekwa navanachiremba.
Vanhu vasingazive kuti vane chirwereichi vanenge vaine inonzi type two diabetes inokonzerwa nezvinhu zvekudya zvinhu zvakaita sesadza kunyanya munhu asingazvigwinyise muviri uye kuva nemuviri wakakura.
Vana chiremba vanoti munhu abogona kuona kuti ave nechirwere ichi kuburikidza nekuonda zvakanyanya munguva pfupi, kurutsa, kusaona zvakanaka, kusafema zvakanaka uye kungonzwa kuneta nguva zhinji.
Asi vamwe vevanhu ava vave kubatsirikana nekushandisa muchina wechizvino zvino wakaparurwa munyika gore rapera inonzi D-nurse technology.
Muchina uyu unoshandiswa kuveneka shuga inenge iri mumuviri wemunhu kana kuti D-nurse Glucose Meter uye D-nurse app panharembozha.
Nyika yeChina ndiyo yakaparura muchina uyu muna 2015.
Kambani yeVivid Health ndiyo yakaparura hurongwa hwekushandiswa kwe app iyi muZimbabwe mukupera kwegore rapera.
App iyi yauyawo panguva yakanaka munyika sezvo vanhu vane chirwere cheshuga vange vari kuchema chema kuti kuenda kuna chiremba kunodhura. Mumwe anoti abatsirikana neap iyi ndiVaCourage Chombo.
Izvi zvatsigirwa naVaSimba Mapfumo avo vave nemakore gumi vachirarama nechirwere cheshuga.
VaMapfumo vatiwo mushure mekuwana mamiriro eshuga yavo vave kukwanisa kutumira zvinenge zvabuda kuna chiremba wavo sezvo ane app iyi panharembozha yake.
Mumwe wevakuru veVivid Health, VaBlessed Musisinyani vati kambani yavo iri kupa vanhu pachena kamushina kadiki-diki kanonzi Mobile Glucose Meter kanoiswa panharembozha kubatsira kuverenga mamiriro eshuga. Vati tarisiro yavo ndeyekurerutsira varwere hupenyu hwavo.
VaMusisinyani vaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti vanhu vazhinji vave nenharembozha kusanganisira vanogara kure nezvipatara vakaona zviri nyore kuti vanhu vashandise nharembozha mukuchengetedza hutano hwavo.
VaMusisinyani vanotiwo szvo varikupa michina iyi pachena munhu anozotengawo anonzi ma"strips" anoiswa ropa. VaMusisinyani vati izvi zvinodzikisa mari inoshandiswa nevaneshuga.
Mukuru weZimbabwe Diabetes Association, Doctor John Mangwiro vaudza Studio 7 kuti vanofadzwa zvikuru nekushandiswa kwehumhizha uhu mukuderedza mari inobhadharwa nevarwere. VaMangwiro vati sesangano vakatambira nemufaro mukuru App yeD-nurse iyi.
VaMangwiro vatiwo munguva shoma yapfuura munhu anorarama neshuga aida mari inodarika mazana matatu emadhora pamwedzi. Vatiwo tarisiro yavo ndeyekuti zvinoshandiswa nevane shuga zvirambe zvichiderera mutengo sezvo ruzhinji rwuri kunetsekana kuwana mari.
Sangano reZimbabwe Diabetic Association rakurudzira kuti makambani ari munezveutano akaita seVivid anodzidzisawo vanogara kumaruwa mashandisirwo e app iyi.